Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » I-US North Northeast ilungiselela uqhwithela lweNkanyamba uHenri
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngesantya somoya ngoku malunga ne-75mph, uHenri kulindeleke ukuba abethe iLong Island okanye emazantsi eNew England ngeCawa.
Isiqhwithi seTropical uHenri sinyuselwe kwinkanyamba.
Izilumkiso ezimandla zemozulu zikhutshiwe kumantla mpuma e-US.
Kulindeleke imvula enkulu, kunye neZiko leNkanyamba leLizwe lilumkisa ukuya kuthi ga kwi-intshi ezili-10 zemvula kwezinye iindawo.
Isitshingitshane seTropical uHenri siphuculwe namhlanje saya kwinqanaba lesaqhwithi liziko leNkanyamba laseMelika. UHenri wanyuselwa kwisaqhwithi setropiki waya kwinkanyamba ngentsasa yangoMgqibelo, kwaye kulindeleke ukuba afike ngeCawe.
Umlawuli we-FEMA uDeanne Criswell
Izilumkiso ezibi zemozulu zikhutshiwe kumantla mpuma e-US, njengoko iNkanyamba uHenri ilandelela emantla ntshona iAtlantic.
Ngesantya somoya okwangoku malunga ne-75mph, uHenri kulindeleke ukuba abethe iLong Island okanye emazantsi eNew England ngomso.
Ukuba ithe yahlasela iLong Island, iya kuba sisaqhwithi sokuqala ukubetha apho ukusukela ngo-Gloria ngo-1985. Ukuba iye yawa eNew England, iya kuba yinkanyamba yokuqala ukwenza oko ukusukela ngo-Bob ngo-1991, eyabulala abantu abali-15 yaza yahlasela Ibhili engaphezulu kwe- $ 1.5 yezigidigidi kumonakalo.
UHenri ngoku uza nesantya somoya esijikeleze i-75mph (120kph) esiya e-US, kwaye kulindeleke ukuba someleze njengoko usondela kumhlaba. Izilumkiso zokuhamba ngesiqhwithi zikhutshiwe zisuka eNew York zisiya eMassachusetts. Iirhuluneli kula mazwe, nase-Connecticut naseRhode Island, bacebise ngokuchasene nokuhamba ngokungeyomfuneko. I-Connecticut neMassachusetts zikwabize amalungu oGada weSizwe ukuba asebenze ngokuzilungiselela ukufika kukaHenri.
Kulindeleke imvula enkulu, kunye neZiko leNkanyamba leSizwe isilumkiso ukuya kuthi ga kwi-10 ye-intshi yemvula kwezinye iindawo. "Imvula enkulu evela eHenri ingakhokelela kwisikhukula esikhulu, ezidolophini, kunye nezikhukula ezincinci," licebise iziko, longeze ukuba "inkanyamba okanye ezimbini" zinokwenzeka eNew England ngeCawa.
INgilani entsha sele iphekwe emva kweeveki ezininzi zemvula enkulu. I-Arhente yoLawulo lweNtlekele kaRhulumente Umlawuli uDeanne Criswell uthe ngoMgqibelo ezi meko zinamanzi zithetha ukuba uHenri angayisiphula ngokulula imithi kunye neentambo zombane, ezinokuthi zikhokelele kwiintsuku zokuphuma.
"Sizakubona ukucima kombane, siza kubona imithi egungxulweyo, kwaye nasemva kokuba isiphepho sidlulile, isoyikiso sokuwa kwemithi kunye namalungu omzimba sisekhona," utshilo.
Umthetho omtsha obiza iNkomfa yeWhite House kwi...